समाचार Archives - Page 191 of 217 - Nepal Insider
युएईमा नेपाली कामदार बोकेको गाडी दुर्घटना, ५ को मृत्यु
काठमाडाैँ । युएईको आबुधाबीमा कामदार बोकेको गाडी दुर्घट्ना भएको छ । दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाली कामदार बोकेको गाडी दुर्घटना भएकोले मृत्यु नेपाली हुनसक्ने आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । तर, मृतकको पहिचना नभएको दूतावसले जनाएको छ । बसमा २४ जना सवार थिए । त्यसमध्ये १६ जना नेपाली कामदार रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कतारमा अब घरेलु श्रमिकले पनि तीन दिन अघि जानकारी दिएर काम छाड्न सक्ने
काठमाण्डौ – कतारमा घरेलु श्रमिकले तीन दिनअघि जानकारी दिएर काम छाड्न पाउने भएका छन् । कतारले आफ्नो श्रम कानुन सुधार गर्दै घरेलु श्रमिकका लागि यो नियम ल्याएको हो । यसअघि काम छाड्न रोजगारदाताको अनुमति (एक्जिट परमिट) अनिवार्य थियो । कतारले गरेको नयाँ निर्णअनुसार ग्यास, तेल कम्पनीमा कार्यरत, म्यारिटाइम, कृषि, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थान र आवधिक प्रकृतिका कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो करार अवधिमै काम छाड्न सक्नेछन् । तर यो नियम कतार प्रहरीमा भने लागू हुने छैन । नयाँ कानुनले नयाँ श्रम बजार खुलाउनको लागि प्रोत्साहन गरेको सरकारी सूचना अधिकारीले बताएका छन् । नयाँ श्रम कानुनले दक्ष श्रमिक ल्याउन सहयोग पुग्ने कतारको विश्वास छ । कतारले गएको वर्षको अक्टोबरमै यो प्रणाली लागू गर्ने भनेको थियो र २०२० को जनवरीबाटै काफला प्रणाली पूर्णतया खारेज गरिने जनाएको थियो ।
काठमाडौं । पोखराको मणिपाल हस्पिटलमा २६ वर्षीया महिलाले एकै पटकमा चार सन्तानलाई जन्म दिनुभएको छ । स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–१ कि सुनिता पौडल प्रधानले आज बिहान ९ः०० बजे शल्यक्रियामार्फत चार सन्तानलाई जन्म दिनुभएको हो । हस्पिटलका डा महेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा पौडेलले सकुशल चार सन्तान जन्माएको मणिपाल अस्पतालमा पुस्तकालयमा कार्यरत खिम लामिछाने काजीले जानकारी दिनुभयो । पौडेलले जन्माएका सन्तानमा पहिलो छोरी १.६ किलो तौल, दोस्रो छोरा १.३ किलो तौल, तेस्रो छोरी १.३ किलो तौल र चौथो छोरी १.४ किलो तौलका रहेका छन् । डाक्टर पाण्डेका अनुसार अहिले नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ । तौल कम भएकाले चारै नवजात शिशुलाई सघन कक्षमा राखिएको बताइएको छ । यसअघि पौडेलका एक छोरा छन् ।
प्रहरीले आस्था राउतको भिडियोबारे अनुसन्धान थाले
२ माघ, काठमाडौं । गायिका आस्था राउतले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको भिडियोमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले छानविन गर्न निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिइ सकिएको बताए । उनले भने, ‘भिडियो सार्वजनिक भएपछि उहाँले लगाउनु भएको आरोप र त्यस दिन के भएको थियो भन्नेबारे बुझ्न निर्देशन दिएका हौं ।’ क्षेत्रीले राउतमाथि दुर्व्यहार भएको भए त्यो गलत हुने बताउँदै भने, ‘तर, उहाँले जसरी बोल्नु भएको छ, त्यो शैली पनि संस्कारजन्य चाहिँ देखिएन ।’ प्रकरणमा दोषी देखिने पक्षमाथि कारबाही हुने उनले बताए । यसअघि बिहीबार राउतले एउटा भिडियो सन्देश जारी गरेकी थिइन् । जसमा उनले विमानस्थलमा चेकजाँचका क्रममा आफूलाई प्रहरीले दुर्व्यहार गरेको जनाएकी छन् । चेकि
यी २५ वर्षिया युवतीले आकाशमा उडिरहेको जहाजको ढोका खोल्न खोजेपछि…
एक २५ बर्षिया युवतीले आकाशमा उडिरहेको बिमानको ढोका खोल्न खोजेपछि हं’गामा म’च्चिएको छ । यी २५ वर्षिया युवतीले आकाशमा उडिरहेको जहाजको ढोका खोल्न खोजिन् । इंग्ल्यान्डको राजधानी लन्डनस्थित स्ट्यान्सटेड विमानस्थलबाट टर्कीको डालामानतर्फ उडान भरेको जेट टू जहाजमा ती युवतीले म’च्चाएको उ’पद्रो उनका लागि म’हँगो सा’बित भएको छ । २५ वर्षीय क्लो हेन्स नामकी युवतीले उडिरहेको विमानको ढोका नै खोल्न खो’जेपछि विमानका कर्मचारीले त’त्कालै नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहँदा त’त्कालै विमानलाई दुइटा फा’इटर जेटले एस्कर्ट गरेर स्ट्यान्सटेड विमानस्थलमै फ’र्काएपछि बिमान र यात्रु सु’रक्षित रहेका छन् । निकै उचाइमा रहेको जहाजमा रहेकी ति युवतीलाई नियन्त्रणमा लिन जहाजका कर्मचारीले अन्य यात्रुको सहयोग समेत लिनु परेको थियो । उनी सवार विमान कम्पनी जेट टू ले २५ वर्षीय क्लो हेन्सलाई उ’द्दण्ड व्य’वहार गरेबापत ८५ हजार पाउन्ड
पोखरा — पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा बिहीबार चम्ल्याहा शिशुको जन्म भएको छ । स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–१ की २६ वर्षीया सुनीता पौडेल प्रधानले ३ छोरी र १ छोरालाई जन्म दिएकी हुन् । चारैजना शिशु र आमाको स्वास्थ्य ठीक रहेको अस्पतालले जनाएको छ । डा. महेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा शल्यक्रियामार्फत चार बच्चाको जन्म दिइएको हो । डा. पाण्डेका अनुसार पहिलो बच्चा छोरी डेढ केजीकीलाई ९ बजेर ४९ मिनेटमा निकालिएको थियो । त्यसपछि दोस्रो बच्चा छोरा (१.३ केजी), तेस्रो र चौथो बच्चा छोरीहरु (१.३ र १.४ केजीका) लाई ९ बजेर ५० मिनेटमा निकालिएको हो । पाण्डे नेतृत्वमा ७ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पहलमा करिब ४० मिनेट लगाएर शल्यक्रियामार्फत बच्चाको जन्म गराइएको हो । ‘भिडियो एक्सरे गर्दा तीनवटा बच्चामात्रै देखिएको थियो’ पाण्डेले भने, ‘तर शल्यक्रिया गर्दा चारवटा भेटिए ।’ पाण्डेका अनुसार प्रति ८ लाखमा एकजनाले चम
कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेलाई मात्र उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति
काठमाडौं : कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार केही नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। समिति सभापति जयपुरी घर्तीले समावेशी छात्रवृत्तिका नाममा विभिन्न विकृति बढेकाले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताइन्। जुन व्यक्तिले छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने हो त्यसले नपाएको गुनासो धेरै आएकाले कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्यरूपमा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्रै उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्। ‘पिछडिएको क्षेत्र कर्णाली भन्यो तर काठमाडौं बस्नेहरूले कर्णाली नाम लेखेर लिने गरेको पाइयो। गरिब भन्यौँ अरू नाम लेखेर लिने गरेको पाइयो। सरकारी भन्यो प्राइभेट पढेकालाई कागज बनाएर छात्रवृत्त
भारतीय चर्चित कमेडियन कपिल शर्माको छोरीको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
एजेन्सी । भारतीय चर्चित कमेडियन कपिल शर्माले आफ्नो छोरीको एक तस्वीर समाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन् । गएको मंसिर २४ गते छोरीको जन्म भएपछी पछिल्लो समय कपिल शर्मा र उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ निकै खुशी छन् । कपिलका धेरै फ्यानले उनको छोरीको तस्वीर हेर्न मन गरिरहेका थिए । हालै कपिल शर्माले आफ्नो छोरीको तस्वीर सार्वजनिक गरे लगत्तै उनका फ्यानले मनपराएका छन् । अहिले कपिल शर्माको छोरीको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । तस्वीरमा कपिल छोरीको साथमा छन् । उक्त तस्वीरमा धेरैले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यस्तो रह्यो बिहीबार सुनको भाउ
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुचाँदीको भाउ स्थिर देखिएको छ । केही दिन घटबढ भइरहेको सुनको भाउ बिहीबार भने स्थिर बनेको हो । आइतबार प्रति तोलाको ७५ हजार रुपैयाँमा, सोमबार ७४ हजार ८ सय रुपैयाँ, मंगलबार ७४ हजार, बुधबार ७४ हजार ७ सय रुपैयामा कारोबार थियो । बिहीबार अर्थात आज भने स्थिर रहँदै प्रति तोला ७४ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै, आज तेजावी सुनको मूल्य पनि स्थिर रहेकोे छ । आज तेजावी सुन प्रतितोला ७४ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै बिहीबार चाँदीको मूल्य पनि स्थिर रहेको छ । चाँदी प्रति तोला ८ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बुधबार पनि चाँदी प्रति तोला ८ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
टिपरका कारण दुर्घटनाः पाँच जनाको मृ’त्यु, १५ जना घा’इते !
विराटनगर, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रदेश १ मा टिपरका कारण १४ वटा सडक दु’र्घटना भएका छन्। टिपर दु’र्घटनामा पाँच जनाको मृ’त्यु भएको छ भने १५ जना घा’इते भएका छन्। लोड भएका बेला ती’व्र गतिमा कुदाइँदा, अनु भव नभएका चालक, साँघुरो सडक लगायतका कारणले टिपर दुर्’घटना भएको पाइएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सडकमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा तीव्र गतिमा कुदाइने टिपरका कारण प्रदेश १ का तराईका जिल्लामा सडक दुर्घटना बढि हुने गरेका छन्। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो लगायतका निर्माण सामग्री ढुवानीमा प्रयोग गरिने टिपर लोड भएको अवस्थामा पनि सडकमा अतिनै तीव्र गतिमा कुदाइने गरिएको छ। बनावटका हिसाबले अरु सवारी जस्तो सजिलो नहुने टिपर निश्चित गतिमा कुदाउन आवश्यक रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। मोरङको बेलबारी उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव विवेक मिश्र टिपरमा चालकको ला’परवाही धेरै रहेको बताए। व्यवसायी र सरोकारवाला निक